ကိုယျမမွငျရတဲ့တဈဖကျ ဘာရှိမလဲဆိုပွီး စပျစုတတျတဲ့အကငျြ့လေးကို ပွငျပါ – Shinyoon
ကိုယျမမွငျရတဲ့တဈဖကျ ဘာရှိမလဲဆိုပွီး စပျစုတတျတဲ့အကငျြ့လေးကို ပွငျပါ
ကိုယျမမွငျရတဲ့တဈဖကျ ဘာရှိမလဲဆိုပွီး စပျစုတတျတဲ့အကငျြ့လေးကို ပွငျပါ ။
လမငျးကွီးကို ကွညျ့တဲ့အခါ . . . လငျးနတေဲ့တဈဖကျ မှောငျနတေဲ့တဈခွမျးရှိနသေလို လူတှမှောလဲ ကိုယျမမွငျရတဲ့ ကိုယျကွညျ့ခှငျ့မရှိတဲ့ မကျြနှာနောကျတဈဖကျရှိနတေတျပါတယျ ။ ဒါကို ခဏခဏ မစပျစုပါနဲ့ အရမျးလဲ မသိခငျြနဲ့ တကယျလို့ကိုယျသိပျကို သိခငျြနတေဲ့ တဈဖကျမှာ ကိုယျဟာ ရှိမနခေဲ့မှနျးသိရငျ ပိုပွီးနာကငျြခံစားရလိမျ့မယျ
ငါမသိခဲ့ရငျ ငါသိဖို့မကွိုးစားခဲ့ရငျအကောငျးသားဆိုတဲ့နောငျတတှနေဲ့ဝေးမှနျးမသိ ဝေးသှားကွရတယျ ။ မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတှပေဲ ဖွဈဖွဈ . . . ခဈြသူအခငျြးခငျြးပဲ ဖွဈဖွဈ လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့လြှို့ဝှကျခကျြနဲ့ကိုယျ ရှိနတေတျကွပါတယျ ။ ကိုယျ့ကို မသိစခေငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှပေဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကို ဖုံးကှယျထားတဲ့ အမှနျတရားတှပေဲ ဖွဈဖွဈ တဈခု ဒါမှမဟုတျ တဈခုထကျပိုပွီးလဲ ရှိနတေတျပါတယျ
ကိုယျ့လို လူတိုငျးက မဖွူစငျနိုငျဘူးလေ ကိုယျ့ဘကျက အရိုးသားဆုံးနဲ့ ဆကျဆံပမေယျ့ တဈဖကျက ပှငျ့လငျးခငျြမှ ပှငျ့လငျးတတျတာမြိုးလေ . . . မာယာတှေ ပလီပလာတှနေဲ့ ကိုယျ့အပျေါ ဘယျလိုပဲ ဆကျဆံဆကျဆံပါ . . .ကိုယျ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံးသာ ဖွူစငျ မကျြနှာဖုံးဆိုတာ တဈသကျလုံး ဝတျထားလို့ရတာလဲ မဟုတျဘူးလေ အခြိနျတဲ့အခါ မကျြနှာဖုံးတှေ အလိုလို ကှာကလြာပါလိမျ့မယျ ။
ကိုယျက အရမျးကွီးမြှျောလငျ့ထားပွီး ကိုယျ့အတှကျမြား ကိုယျမမွငျရတဲ့တဈဖကျမှာ တနျဖိုထားမှုအလေးထားမှုတှေ ရှိလိမျ့မယျလို့လူတိုငျးထငျတတျကွတာပဲ မွငျသာအောငျပွောရရငျ သူ့စိတျထဲမှာ ကိုယျရှိနလေိမျ့မယျ တဈထဈခကြွီး ယုံပဈလိုကျတာမြိုးပေါ့ ။ ကိုယျထငျထားခဲ့သလောကျ ကိုယျက အရေးပါခဲ့မှနျးမသိခငျတုနျးက မသိဖာသာနဲ့ နသောအောငျနလေို့ရပမေယျ့ ကိုယျသိပွီးသှားတဲ့အခါ အဲ့ဒီဆကျဆံရေးကို ရရှေညျဆှဲထားဖို့အတျောလေးကို ခကျခဲပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ သူ့စိတျထဲမှာ ဘာရှိနမေလဲဆိုတဲ့အတှေးနဲ့အရာရာကို လိုကျပွီး မစပျစုပါနဲ မသိရငျ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး သိပွီးသှားတဲ့အခါ . . . ကိုယျပဲ နာကငျြခံစားရတတျပါတယျ အခြိနျတနျတဲ့အခါ . . အခြိနျတနျလာခဲ့သလို ကိုယျလဲ အဆငျပွသေလို နနေိုငျလာမှာပေါ့ ငါသာ သိအောငျမကွိုးစားခဲ့ရငျ အခုလို ဖွဈမှာ မဟုတျဘူးဆိုတဲ့နောငျတတှလေဲ ရှိလာတော့မှာ မဟုတျဘူးလေ ။
ကိုယ်မမြင်ရတဲ့တစ်ဖက် ဘာရှိမလဲဆိုပြီး စပ်စုတတ်တဲ့အကျင့်လေးကို ပြင်ပါ ။
လမင်းကြီးကို ကြည့်တဲ့အခါ . . . လင်းနေတဲ့တစ်ဖက် မှောင်နေတဲ့တစ်ခြမ်းရှိနေသလို လူတွေမှာလဲ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ ကိုယ်ကြည့်ခွင့်မရှိတဲ့ မျက်နှာနောက်တစ်ဖက်ရှိနေတတ်ပါတယ် ။ ဒါကို ခဏခဏ မစပ်စုပါနဲ့ အရမ်းလဲ မသိချင်နဲ့ တကယ်လို့ကိုယ်သိပ်ကို သိချင်နေတဲ့ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ်ဟာ ရှိမနေခဲ့မှန်းသိရင် ပိုပြီးနာကျင်ခံစားရလ်ိမ့်မယ်
ငါမသိခဲ့ရင် ငါသိဖို့မကြိုးစားခဲ့ရင်အကောင်းသားဆိုတဲ့နောင်တတွေနဲ့ဝေးမှန်းမသိ ဝေးသွားကြရတယ် ။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် . . . ချစ်သူအချင်းချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ကိုယ် ရှိနေတတ်ကြပါတယ် ။ ကိုယ့်ကို မသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီးလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်
ကိုယ့်လို လူတိုင်းက မဖြူစင်နိုင်ဘူးလေ ကိုယ့်ဘက်က အရိုးသားဆုံးနဲ့ ဆက်ဆံပေမယ့် တစ်ဖက်က ပွင့်လင်းချင်မှ ပွင့်လင်းတတ်တာမျိုးလေ . . . မာယာတွေ ပလီပလာတွေနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လိုပဲ ဆက်ဆံဆက်ဆံပါ . . .ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံးသာ ဖြူစင် မျက်နှာဖုံးဆိုတာ တစ်သက်လုံး ၀တ်ထားလို့ရတာလဲ မဟုတ်ဘူးလေ အချိန်တဲ့အခါ မျက်နှာဖုံးတွေ အလိုလို ကွာကျလာပါလိမ့်မယ် ။
ကိုယ်က အရမ်းကြီးမျှော်လင့်ထားပြီး ကိုယ့်အတွက်များ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့တစ်ဖက်မှာ တန်ဖိုထားမှုအလေးထားမှုတွေ ရှိလိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းထင်တတ်ကြတာပဲ မြင်သာအောင်ပြောရရင် သူ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ရှိနေလိမ့်မယ် တစ်ထစ်ချကြီး ယုံပစ်လိုက်တာမျိုးပေါ့ ။ ကိုယ်ထင်ထားခဲ့သလောက် ကိုယ်က အရေးပါခဲ့မှန်းမသိခင်တုန်းက မသိဖာသာနဲ့ နေသာအောင်နေလို့ရပေမယ့် ကိုယ်သိပြီးသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကို ရေရှည်ဆွဲထားဖို့အတော်လေးကို ခက်ခဲပါတယ် ။
ဒါကြောင့် သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အရာရာကို လိုက်ပြီး မစပ်စုပါနဲ မသိရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး သိပြီးသွားတဲ့အခါ . . . ကိုယ်ပဲ နာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ် အချိန်တန်တဲ့အခါ . . အချိန်တန်လာခဲ့သလို ကိုယ်လဲ အဆင်ပြေသလို နေနိုင်လာမှာပေါ့ ငါသာ သိအောင်မကြိုးစားခဲ့ရင် အခုလို ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နောင်တတွေလဲ ရှိလာတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလေ ။